မောင်ဘဖြူ၏ မှတ်တမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မောင်ဘဖြူ၏ မှတ်တမ်း
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Apr 20, 2013 in Creative Writing | 20 comments
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် ရန်ကုန်မြို့ စာအုပ် အဟောင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်မှ ဝယ်ယူလာခဲ့သော စာအုပ်ထူကြီး တစ်အုပ်အား ဦးမိုးညို ကုန်စုံဆိုင်မှ ဝယ်ယူထားသည့် “ဂျိုးသိန်း” ဆေးပေါ့လိပ်ဟူသည့် အမြည်းနှင့် ဇိမ်ပြေနပြေ ဖတ်ရှုလျှက် ရှိနေပေသည်။ အဆိုပါ စာအုပ်ထူကြီးမှာ သားရေဖုံးဖြင့် သေချာစွာ အကျအန ထုပ်ပိုးထားသည်ကို ထောက်ရှုသဖြင့် စာအုပ်ပိုင်ရှင်မှာ လွန်စွာမှ သေသပ်စွာ နေတတ်သူ တစ်ဦး၏ စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်းကို ငြင်းဖွယ် မရှိပါပေ။
စာအုပ်ကြီး၏ ပထမဆုံး စာမျက်နှာတွင် “မောင်ဘဖြူ၏ မှတ်တမ်း” ဟူသော စာလုံးကြီးကို ရေးထိုးထားလေသည်။ အတွင်း စာမျက်နှာ များတွင်မူ လွန်စွာ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ကောင်းသော၊ လွန်စွာ အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းသော၊ လွန်စွာ ဆန်းကြယ်သော ကိုယ်တွေ့ အကြောင်းအရာများကို မှတ်တမ်းပြု ရေးသားထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရလေ၏။
အဆိုပါ “မောင်ဘဖြူ၏ မှတ်တမ်း” စာအုပ်ကြီး၏ ဒုတိယ စာမျက်နှာတွင်မူ လှပဝိုင်းစက်သော လက်ရေးမူဖြင့် ဤသို့ ရေးထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရလေသည်။ ထိုသော လက်ရေးများမှာ ကျွန်ုပ် သက်တမ်းတစ်လျှောက် တွေ့ဖူးသမျှထဲတွင် အလှပ၊ အဝိုင်းစက်ဆုံး ဟူ၍ပင် ဆိုနိုင်လေသည်။ ရေးထားပုံမှာကား ဤသို့ ဖြစ်လေ၏။
ကျွန်ုပ် မောင်ဘဖြူသည် ငယ်စဉ်အရွယ်မှ စ၍ ဆရာပေါင်း များစွာဖြင့် တွေ့ခဲ့ရဖူးလေ၏။ ထိုထိုသော ဆရာများအနက်မှ ဆရာဝါ သည် ကျွန်ုပ်အတွက် ဖခင်ကြီး တစ်ဦးသဖွယ် လည်းကောင်း၊ ဆရာသဖွယ် လည်ကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းသဖွယ် လည်းကောင်း လွန်စွာမှ မှီခို အားထားခဲ့ရသူ ဟူ၍ မှတ်ယူရပေမည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆရာဝါနှင့် ခရီးပေါင်းများစွာကို လိုက်ပါသွားခဲ့ရဖူးပါသည်။
ကျွန်ုပ် လူပျိုပေါက် အရွယ်ခန့်တွင် ကျွန်ုပ်၏ အားထားရာ ဆရာဝါမှာ ဆန်းကြယ်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြင့် အနိစ္စ ရောက်ခဲ့ရပါ၏။ ထိုအချိန်ခန့်မှ စ၍ပင် ကျွန်ုပ်သည် မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား ဒေသများစွာသို့ လှည့်လည်ကာ တရားရှုမှတ်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပေ၏။ ယင်းသို့သော အချိန်များအတွင်း ကျွန်ုပ် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံကြိုက်ခဲ့ရသည့် ထူးခြား ဆန်းကြယ်သည့် အဖြစ်အပျက်များစွာ ရှိခဲ့လေသည်။ ဆရာဝါနှင့် အတူ လိုက်ပါခဲ့စဉ်ကလည်း ယင်းသို့ ဆန်းကြယ်သော အဖြစ်များကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါ၏။
ထိုထိုသော အကြောင်းအရာများအား နောက်လာနောက်သားများ ဗဟုသုတ ရစိမ့်သောငှာ “မောင်ဘဖြူ၏ မှတ်တမ်း” ဟူ၍ ဤစာအုပ်ကြီးအတွင်း ကျွန်ုပ် ရေးမှတ်ခဲ့လေပြီ။
ထိုသူ မောင်ဘဖြူ ၏ ဒုတိယ စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည့် အတိုင်းပင် အတွင်းမှ စာမျက်နှာများပေါ်တွင် လွန်စွာ ကြက်သီးထဖွယ်ရာ၊ ထိတ်လန့် အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းသည့် အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှုရပါလေ၏။ အချို့သော အကြောင်းအရာများမှာမူ ယုံရခက်ခက် ဟူသကဲ့သို့ ယုံကြည်ရန် လွန်စွာ ခက်ခဲလှပေ၏။ သို့တစေ ထိုသော အကြောင်းအရာများကို စာရှုသူတို့လည်း ဖတ်ရှုစိမ့်သောငှာ ကျွန်ုပ်မှ မောင်ဘဖြူ (ဦးဘဖြူ) ၏ မှတ်တမ်းကြီးအား တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်စေခြင်း မရှိပါပဲ ဝတ္ထုသွားဆန်ဆန် ပြန်လည် ရေးသား ဖော်ပြပါပေအံ့။ ယခု ပထမဆုံး အနေဖြင့် “ဦးဃာသိ” ဟူသည့် ထူးဆန်းလှသော လူတစ်ဦး အကြောင်းကို ဖော်ပြပါပေအံ့ …..။
မောင်ဘဖြူ မှတ်တမ်းက ဒီလိုပါလို့
အရင်ဆုံး ချပြတာပါဗျ …
နောက်တော့မှ တစ်ပုဒ်ချင်း ရေးမယ်လေ ..
အမှန်ကတော့ ဦးဦးပါရေ …
ကပ်စေးနဲကြီး သဂျီးကို နည်းနည်း နှိပ်စက်တာ … ဟီး ..
စောင့်နေပါ့မယ် သိပ်တော့ မကြာစေနဲ့ နော်
စိတ်ဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါပေတယ် ။တကယ်ပါဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုကိုရာမည ရေ ..
သိပ် မကြာစေရပါဘူး …
နက်ဖြန် သို့မဟုတ် ဘယ်သောခါ တင်ပါ့မယ် ..
ခုလို တခုတ်တရ လာအားပေးတာ ရှဲရှဲပါနော့ ..
အ ဟမ်း… ဝဋ်လည်မယ် ဘိုအံ…
ခင်ဗျား ခုလို တိုးလို့တန်းလန်းလုပ်လို့..လို့…လို့… အား ဟိ
အားဟိ ဆိုတဲ့ ဟာဂျီးကို လန့်ထှာ …
တစ်စိတ်ရှိ တန်းလန်း ဖြစ်မယ်ဆိုဒါဂျီးနဲ့ပဲ
လူကို ကိုင်ပေါက်နေဂျဒယ် .. ဂယ်ဘဲ ..
လုပ်ပြန်ပြီ ဟို တစ်ပုဒ်တုန်းကလည်း တို့လို့တန်းလန်းနဲ့ အစမသတ်ဘူး အခုလည်း တစ်ဝက်တပျက်နဲ့ သား မြေး မြစ် တီ တွတ် တွေထိ ဖတ်နေရအောင် လုပ်တာလား ငအံစာရဲ့ ဒါကြောင့်မို့လည်းမိန်းမမရတာဘဲ:kwi:
လာဗျန်ဘီ တစ်ယောက် …
နာ့ကို အတော်ဂျစ်ဂျဒဲ့ လူဒွေ …
ဟဲ့ .. မိဗုံ ..
မိန်းမ က မယူချင်လို့ဟဲ့ ..
ယူချင်ရင် အလွယ်လေး …
နာ့အမေက မိန်းမ ပေးစားဖို့တောင် ရွာမှာ စပ်ထားပြီးသား
နာက အူလည်လည် လုပ်နေလို့မို့ …
ကိုယ့်ရွာသူပဲ ယူရမယ်တဲ့ …
မင်းမှာသစ္စာ လူမှာကတိတဲ့ နင့်ဂို ဖေပေါက်နဲ့ တိုင်ပြောမယ် ဒါဗြဲ….
အဲဒီမှတ်တမ်းကြီးထဲ.. အင်္ဂါဂြိုလ်သားတွေအကြောင်း.. ထည့်ရေးပေးနော်..နော်.. နော်လို့..
စာရေး ဆရာတွေရဲ့ စိတ်ကူးဆန်းတွေကို
မလှောင်နဲ့ဗျ … လွတ်လပ်စွာ ဆန်းကြယ်ကြပါစေ ..
ရေငုပ် သင်္ဘော ဆိုတာတွေတောင်
စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ စိတ်ကူးက
ပေါက်ဖွားလာခဲ့တာ မဟုတ်လား … (ရမ်းတုပ်)
အဲ့ဒါ .. အဲ့ဒါ ….
မင်းသိင်ခ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကျုပ်လည်းထူးဆန်းထွေလာ
ပုံလာလာပြောတိုင်းယုံ xxxxxx ပါလာတာလေးလဲကုန် ……။ xxx ဖတ်ရတာ အချိန်လည်းကုန် xxxxxxအားစိုက်တော့ မျက်စေ့မှုန် …………..။
ဒီလို စာအုပ်တွေဖတ်မိရင် ဒီလိုသီချင်းဆိုချင်စိတ်က ဘယ်တော့မှမပျောက်ဘူး …………။
တိုးလို့တန်းလန်းကိစ္စ အပေါ်က လူတွေပြောပြီးသားဆိုတော့ဘာမှထပ်မပြောတော့ပါဘူး…
ကျွှန်ုပ်လည်း လွန်စွာစိတ်ဝင်စားမိချေသည်တကား … ထို့ကြောင့် သင်ရေးတာ စောင့်မနေနိူင်သဖြင့် သင့်လက်ထဲရှိသော မှတ်တမ်း စာအုပ်ကိုသာ ပေးချေတမုန့် …။ ရိုးရိုးမပေးက ရှယ်လုယူရန် ကျနုပ်၏ တပည့်များအား စေလွှတ်ပီးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်လည်း သင်၏ အကွက် ကျိုမျင်ဒေါဂျောင့်
တပည့် သရာ မွေးထားဂျောင်း …
အင်းခွေးဂျီး နရာ ကိုလည်း ခြံတွင်း လွှတ်ထားပီး ဖစ်ဂျောင်း …
နင် အပိုင်းဆက်ဆိုရင် အမှတ်စဉ်လေး တပ်ဦး
လူတွေကို မျက်စိလည်အောင် မလုပ်နဲ့ ဒါဗျဲ
ဟဲ့ခြောက်ညက်နှာ ဘယ့်နှာလို့တို့လို့တန်းလန်းတုန်း။ ညီး ဖက်ဖက်ကက်ကိုအားကျလို့လားအေ။ မနှစ်က လဲသူနာဒို့ကို အဲနည်းနဲ့နှိပ်စက်ပြီးပြီ။